Spinata Grande | Tsirom slot £ 5 + £ 500 FREE! Spinata Grande | Tsirom slot £ 5 + £ 500 FREE!
Get ny ramanavy eto vonona, satria tonga ny sasany piñata manorotoro mahafinaritra lehibe fotsiny ho anao. Spinata Grande dia slot lalao amin'ny nahafinaritra Meksikana foto-kevitra, tanteraka tamin'i mariachi mozika sy ny loko Hipoaka teo amin'ny efijery, mba afaka nandresy ny sasany nifanizina biby maro loko ary ny sasany manao vola vola teny an-dalana.
Beat ity lalao ity
Spinata Grande manana 5 reels, 4 andalana sy 40 paylines. Ny foto-kevitra dia ny an'ny antoko fotsiny miandry ny hanomboka. Misy ny sasany upbeat mozika eo aoriana, amin'ny pinatas swaying ao amin'ny tsio-drivotra, miandry ny ho banged mba hanambara ny sasany fanatitra lehibe. Ambience manontolo dia iray amin'ireo fifaliana sy playfulness ary hatrany mahatsiaro ho toy ny ankizy kely miandry ny loka.
Ity no lalao voalohany novokarin'ny NetEnt mba manasongadina ny 5 amin'ny 4 miraingiraingy azon'ny endrika. Izany no mahatonga noho ny tsara tarehy lalao milalao na dia ianao no milalao azy io amin'ny efijery kely toy ny tablette na finday avo lenta.
Afaka manomboka manao io lalao io na aiza na aiza eo amin'ny 20p ny £ 200 isan-kofehy ireny. Ny mety dia 600x nahazo ny voalohany wager vola. Izany no ho ambany noho izany ny mpanelanelana amin'ny tontolo hampifandrafy slot, noho izany dia tsara ho an'ny mpilalao, izay tsy mampaninona Nanao vivery kely ny vola eo amin'ny lafiny lehibe ny sasany mba hahazoana vola nanakodia in taty aoriana.
Ny lalao dia manasongadina ny tombony manaraka endri-javatra:
goavam sariohatra: Ireo marika manaova nandritra ny 2×3 na 3×3 ary noho izany dia ampahany stacked marika manerana reels. mazava, ry zareo tonga nirohotra be ny sasany marika.
Mini slot lalao: Izany no mariky ny goavam tombony izay 3×3 ary manova ho Mini slot milina izay Dons ny sombrero sy ny volombava. Ny Fandresena avy ireo ary mety vetivety na ho vola na tsy andevo spins.
Free spins tombony: Raha mahazo telo aelezo fanehoana an'ohatra eo amin'ny Mini slot lalao, mahazo ny fahafahana handresy maimaim-poana dimy spins. Raha manana mihoatra noho ny telo aelezo fanehoana an'ohatra, dia afaka mahazo ny iray maimaim-poana hafa rehetra namoly tamin'ny mariky aelezo fanampiny.
Nahoana no milalao Spinata Grande?
Ny lalao dia tena mahafinaritra ny milalao, sy ny mahafatifaty sary fa na dia mampahery anao eo raha hahomby amin'ny smacking ny piñata amin'ny alalan'ny filalaovana ny sasany mafy fanampiny mariachi mozika. Ny feo no tsy manahirana anareo betsaka satria tsy intrusive sy ny lalao kilalao Mora sady mandimandina. Arakaraka ny mihodina ny lalao, ny tsara kokoa dia ny vintana mba handresy amin'ny slot ity lalao. Ny fomba ny miraingiraingy azon'ny Grid dia nanao fandaharana sy ny goavam marika hita manao izany ho tantara traikefa ho an'ny eo ho eo slot mpilalao. Tena mahafinaritra tokoa ny lalao hilalao raha mitady sasany hahafinaritra no sady mitady ny hanao ny sasany vola lehibe.